Vaovao - Fitsipika momba ny fitrandrahana herinaratra sinoa
Ny ankamaroan'ny fanafody sinoa nentim-paharazana dia aondrana any ivelany. Mety misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa mbola maro ny tsy fitoviana amin'ny fomba fijerin'ny fanafody sinoa amin'ny fitrandrahana fanafody sinoa. Betsaka ny olona no mihevitra fa ny fitrandrahana fanafody sinoa dia tsy mitovy amin'ny sombin-tsolika fanafody nentim-paharazana sinoa. Fitsaboana nentim-paharazana sinoa izy io, satria maro ny fihetsika simika miafina ao amin'ny doka famoahana fanafody nentim-paharazana sinoa. Ity dia vokatra izay tsy azo tratrarina rehefa mifangaro ny fanafody sinoa nentim-paharazana. Raha ny marina, ny fikarohana nataon'ny orinasa Guangdong Yifang momba ny granules fanafody nentim-paharazana sinoa dia nanaporofo fa ny fitrandrahana fanafody sinoa dia afaka mitazona ny ankamaroan'ny toetran'ny fanafody sinoa. Mandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknolojia, nanjary mazava ny akora mahomby amin'ny fanafody sinoa. Ny fari-pahaizan'ny fanafody sinoa ao amin'ny pharmacopoeia sinoa dia ho fanovozan-kevitra, tsy maintsy afaka mamorona faran'izay haingana ny fenitra alohan'ny fitrandrahana fanafody sinoa izay mahafeno ny toetran'ny fanafody sinoa ary eken'izao tontolo izao izahay, ary manohy manatsara ny dingana fampiharana. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fampandrosoana botanicals ankehitriny.
Ny fanarahan-dalàna sy ny fanatsarana ireo fitrandrahana fanafody nentim-paharazana sinoa dia somary taraiky any aoriana. Miaraka amin'ny fampiharana sy ny fandrosoana tsy tapaka ny drafitry ny fanatsarana ny zava-mahadomelina ao amin'ny fireneko, natsangana tamin'ny voalohany ny rafitry ny fenitra fanafody ho an'ny zava-mahadomelina, ny hafainganam-pandehan'ny fananganana fampahalalana momba ny fitsipiky ny zava-mahadomelina, ary nanjary namboarina sy nohatsaraina kokoa ny asa fitantanana ny fenitra fanafody. Na izany aza, ny fanamarinana ny fitrandrahana fanafody sinoa nentin-drazana dia mbola taraiky ao, indrindra amin'ireo lafiny manaraka ireto:
① Tsy miorina ny fenitra. Ny fitrandrahana fanafody sinoa dia akora ilaina amin'ny famokarana fanafody patanty sinoa. Araka ny antontan'isa, manodidina ny 29,8% amin'ireo fanafody patanty sinoa no mampiasa fitrandrahana fanafody sinoa, saingy mbola misy ihany ny sasany amin'ireo fanafody sinoa izay mbola tsy nametraka fenitra nasionaly. Noho ny tsy fisian'ny fenitra mifehy ny lalàna, ny fenitry ny fangatahana sy ny fenitry ny orinasa dia raikitra amin'ny famokarana sy ny asa aman-draharaha, ary ny fehezan-dalàna mifehy ny fifanarahana dia ampiasaina ho fototry ny fandefasana vokatra, ary ny fomba fanaraha-maso ny kalitaon'ny vokatra dia somary misafotofoto ihany.
② Tsy lavorary ny fenitra. Ireo entana fenitra feno no fototry ny fifehezana mahomby ny kalitaon'ny fitrandrahana fanafody sinoa. Saingy, noho ny famoahana maharitra ny fenitra ho an'ny fanafody sinoa sasany, dia tsy lavorary ireo entana mahazatra. Ohatra, ny fenitra sasany amin'ny fitrandrahana fanafody nentim-paharazana sinoa dia tsy misy fetran'ny residue famonoana bibikely sy ny famaritana metaly mavesatra, ny sasany tsy manana fenitra fitsapana ho an'ny fitaovana fanampiana, ary ny sasany tsy misy fanamarinana fetra mikraoba.
③ Tsy fanarahan-dalàna amin'ny fenitra. Betsaka ny fenitra apetraka amin'ny fanafody sinoa, ary misy tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanomezana anarana, fomba fanomanana, fananana ary fanaraha-maso. Ohatra, ny fanafody fitrandrahana sinoa nentim-paharazana dia manana anarana mitovy fa tsy mitovy ny fomba fanomanana. Raisintsika ho ohatra ny nalaina avy amin'ny Scutellaria baicalensis Georgi, hita in-12 ao amin'ny edisiôna 2010 an'ny Farmacopoeia Sinoa sy ao amin'ny "Prescription of Tradition Chinese Medicine" , "Sarany farany pH alohan'ny fanamainana", "Vahaolana amin'ny fanasana vokatra maloto" ary ny masontsivana fanalahidy hafa izay misy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra vita dia samy hafa be, izay mora miteraka fikorontanana amin'ny famokarana sy ny fampiasana.
④ Tsy mitovy ny haavon'ny fenitra. Ny haavon'ny fitrandrahana fanafody sinoa nentim-paharazana nankatoavina amin'ny endrika fanafody vaovao ary tafiditra ao amin'ny Farmacopoeia sinoa dia somary avo. Na izany aza, ny fitrandrahana fanafody sinoa nentim-paharazana dia mbola manana olana toy ny tsy fahampian'ny teknolojia sy ny tsy fahampian'ny teknolojia fototra. Ho fanampin'izay, ny ankamaroan'ny mpamokatra fanafody sinoa dia orinasa kely manana fari-pahaizana teknika mahantra sy tsy mahay mamokatra. Mahalana izy ireo no manatsara sy mikaroka fatratra ny fizotry ny famokarana ny vokatra ary tsy manana fivoaran'ny vokatra lalina, ka miteraka ambaratonga teknolojia famokarana somary ambany ho an'ny fitrandrahana fanafody sinoa. Fifaninanana tsena ambany sy mikorontana.
⑤ Tsy foanana ny fenitra. Noho ny tsy fahampian'ny fitaovana hanombanana ny fampiharana ny fenitry ny fitrandrahana fanafody sinoa, ny fenitry ny fanafody sinoa sasany dia "velona fa tsy maty", ka misy fenitra sasany izay tsy nohavaozina na nohavaozina nandritra ny taona maro no mbola ampiasaina, ary misy filana maika hametraka mekanisma fanafoanana mahazatra